Galaxy M02 gafere Geekbench na 3 GB nke RAM na Snapdragon 450 | Gam akporosis
Samsung Geekbench kwadoro Samsung Galaxy M02 dị ka mkpanaka ya na Snapdragon 450
Samsung na-akwadebe smartphone ọhụrụ, nke ga-ada n'ahịa ngwa ngwa karịa ka oge na-aga ma na-abịa dị ka onye arụmọrụ dị ala, yabụ anyị na-ekwu maka ọnụ ala.
Na-adịbeghị anya izu ọ na-akpọ aha Galaxy M02, mobaịlụ anyị na-ezo aka na ohere a ma bụrụ nwanne nwoke nke okenye Galaxy M01. webatara na gam akporo Go na njedebe nke July. Nke a bụ amụma dị ka otu n'ime njedebe akụ na ụba na-esote nke South Korea nke ga-abata na Qualcomm Snapdragon 450, yana Galaxy M11. Geekbench anwaleworị ya n'elu ikpo okwu ya ma gosipụtala ọtụtụ nkọwapụta teknụzụ ya site na benchmark.
Geekbench na-akwado na Galaxy M02 bụ njedebe dị ala
Dabere na ihe ngosi kachasị ọhụrụ, ndị Samsung SM-A025F bụ nọmba nlereanya nke kwekọrọ na Galaxy M02. Ngwaọrụ a bụ onye protagonist nke otu Geekbench kachasị ọhụrụ, yana ihe gbasara 108 ihe enwetara na nnwale otu na 486 na nyocha ọtụtụ, ọnụọgụ ndị kwekọrọ na mpaghara mkpanaka ala.
Ọ bụ ezie na akọwapụtaghị ya kpọmkwem na ndepụta Geekbench, ekwenyere na ya ekwentị nwere ike iji Snapdragon 450, echiche nke a na-akwado site na asịrị dị iche iche na nkwupụta mmiri gara aga. Ejiri SoC mee ya ugboro ole, nke bụ 1.80 GHz.
N'aka nke ọzọ, ndepụta akara ngosi na-egosikwa na Galaxy M02 nwere ikike ikike nchekwa 3 GB RAM ma nwalee ya na sistemụ arụmọrụ nke gam akporo 10, nke ga-abịarute na One UI na ya Core version ozugbo ejiri ngwaọrụ ahụ.
Samsung Galaxy M02 na Geekbench
Ka ọ dị ugbu a, enweghị ozi dị na nkọwa ndị ọzọ nke ngwaọrụ ahụ. Na mgbakwunye inweta asambodo Bluetooth, Wi-Fi Alliance akwadokwara Galaxy M02 n'oge gara aga, yabụ ekwuru na ịmalite ya ga-abịa nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung Geekbench kwadoro Samsung Galaxy M02 dị ka mkpanaka ya na Snapdragon 450
Etu esi ejikwa Android ekwentị gị na ngwa ahụ
A na-ekwupụta HTC Desire 20 + na Snapdragon 720G na obodo kwụụrụ onwe ya ụbọchị niile